Kwinqaku lethu "Iimfihlelo ezintle, ulusu olunempilo ebusweni" siya kukuxelela indlela yokuba ngumnikazi wesikhumba sempiliso ebomvu nobuso obuhle. Kwesikhumba sakho akukuxhasi uxinzelelo kunye nokukhungatheka, kufuneka usebenze nayo kwangaphambili. Kwaye sacinga kwaye silungiselela inkqubo ekhethekileyo.
Ibakala elibaluleke kakhulu lokunyamekela li-softfoxide, ngaphandle kwalo awukwazi ukufikelela kwilinen elimnene nelisigqibeleleyo. Ukutshiswa kwelanga, ukondla kunye ne-hydration - ezi zixhobo zesikhumba sobuhle aziyi kukwazi ukuvelisa ngaphandle kokuba kuqhutywe ukuqhutshwa rhoqo. Ukuqhafaza ngokufanelekileyo kuvula ii-pores, kuthatha izinto ezisetyenziswayo kwi-creams, ngoko ke, isakhiwo se-dermis siyaqalwa, okwenza kube lula ukufumana i-tan enombala omhle.
Kwi-summer arsenal kuyimfuneko ukuba ube nezihlunu ezimbini ezinamaqabunga amakhulu angasetyenziswa kanye okanye kabini ngeveki okanye ngeentlobo ezincinci, ukusetyenziswa rhoqo, kwiindawo ezincinci.
Hlanganisa ushukela ngobuninzi, ukhilimu ofudumeleyo ukulungelelaniswa nokufunwa kwisetyhula, ukunyakaza okubanzi emzimbeni, unokusebenzisa kwakhona ubuso. Gcoba ngobuncwane ulusu uze ushuke ngokupheleleyo, uze uhlambe ngamanzi afudumeleyo.
Lezo ndawo zomile, ziya kuncedwa ngokubunjwa kolwandle lwesityuwa okanye ikhofi ecocekileyo kunye neoli yeoli. Ukuba udla ulwandle ityuwa, ungayikhohlwa, kufuneka ulinde ukutyitywa kwetyuwa epheleleyo kwesikhumba. Emva koko kuya kuba nomphumo omkhulu.
Omnye umele aqikelele abo banesifo esikhuselekileyo, kuba iinkqubo zokuqhawula izikhumba ezinokuzikhupha zingakhupha ukuvuvukala, okungekho lula ukuphilisa ebudeni bebusika. Kufuneka ukhethe iipelisi ngeengqungquthela ezijikeleze ngokugqibeleleyo kunye nezicucu zokwenziwa. Awuyi kufumana izithako zemvelo ezifana neentlanzi zerayisi.
Ukuba ulusu alukhuni ngokwaneleyo naliphi na ixesha lonyaka, ingxaki ihlobo kakhulu. Ngako oko, ukukhetha umququzeleli wesikhumba kufuneka ukuba kusengaphambili, sele kusekuqaleni kwehlobo. Ngoku kukho ezininzi izimonyo zokuphucula, ngubani na onokumkhetha?
Okokuqala, kufuneka ukhokelwe luhlobo lolusu lwakho. Okwesibini, umntu kufuneka acinge ngemilinganiselo kunye nendlela yokuphila. Abathandayo bahlamba amaxesha angama-3 ngosuku, bafanele bazi ukuba le nkqubo, ivuselele, ivuselele, kwaye idibanise ulusu.
Akunakulungele ngokupheleleyo ukuhlamba i-gel nsuku zonke, ityhula idermini yesikhumba kwaye iyanqanda ulusu lwendawo yokukhusela i-lipid. Yintoni endiyenzayo? Kubalulekile ukusebenzisa i-gel yetshezi ngeoli zendalo, zicoca ngobumnene ulusu.
Abavelisi bale mveliso bathembisa ukunyusa kwesikhumba, kodwa empeleni isiphumo kwisitya salezi gels ayilona nto. Ngoko ke, emva kokuhlamba, kufuneka usebenzise izimonyo zokuphucula.
Ziziphi ezizozikhethela i-moisturizers?
- nge-SPF engekho ngaphantsi kwe-15.
- Ukudibanisa i-hydration kunye nesondlo. Ngoku iinguqu ezinje zikhutshwa, ezibandakanya iivithamini, i-omega-3 complexes, i-antioxidants nezinye izithako ezincedo.
Zama ukusebenzisa iimveli ezinjengamanzi e-tonic. Iyakondla kwaye iyanciphisa isikhumba, kodwa inenzuzo ebalulekileyo, kufuneka ikhutshwe. La manzi ahlanjululwa emzimbeni. Ihlobo lilula kakhulu: londla, liqinisa, lihlaziya. Kucetyiswa ukuba uyisebenzise emva kokuhlamba.
Udinga ukwazi ukuba ukhilimu emzimbeni usetyenziswa emva kwemizuzu emi-3 okanye emihlanu, emva kokuthatha ishawa. Xa kuvuleka amanye ama-pores, kwaye sele alungele ukufumana izinto ezisetyenziswayo.
Ulusu lwesikhumba luqinisiwe, zonke iintombazana zifuna oku, kwaye ingxaki leyo ixazululwa. Ukusebenza rhoqo ngokomzimba kunye neendlela ezikhethiweyo kakuhle kunokuphucula imeko yesikhumba. Kule nto, akudingeki ukuba uziphephe ngokuqeqesha, unokuhamba, akubi ngaphantsi komthwalo ngokwemigangatho yokusebenza kakuhle. Kwaye kufuneka usebenzise.
Kukho iimfihlo eziliqela zokukhupha ukunakekelwa
Kufuneka ukhethe iindlela zokukhuthaza umkhiqizo we-collagen, kwaye uya kubona ukuba ulusu lube lukhulu.
Izigulane ze-cellulite kwezinye izigaba zesi sifo akunakuncedo kwaye akusoloko zizisa umnqweno oyifunayo. Kodwa ukuba usebenzisa lezi zixhobo, ayiyi kudlula ingqalelo kwesikhumba, iya kuba yinkangala kwaye iqiniswe. I-Cream ngokumelene ne-cellulite ifanele isetyenziswe ngokusikwa, ukunyakaza kweseyhula.
Indlela enkulu yokulwa ne-cellulite. Siza kukhetha ioli ekhethekileyo eya kunceda ukuphucula umjikelezo wegazi, sebenzisa i-massager. Ezinye i-gel cell ze-cellulite ziyafumaneka njengebhotile ene-roller. Ukuba usebenzisa rhoqo iigels, emva kweeveki ezimbini, ukuba zisetyenziswe rhoqo, ziya kuzisa iziphumo ezibonakalayo.
Kufuneka usebenzise izixhobo zokulwa ne-cellulite kunye nezixhobo zokumisela, ukuba iimveliso ezichasene ne-cellulite zisiza ukutshisa amafutha, ngoko izixhobo zokumisela ziba nefuthe eliqinileyo kwaye kubonga kubo ulusu luya kuba lukhulu kakhulu.
Sisoloko sicetyiswa ngabagqirha ukuba ilanga litshitshisa kakhulu, njengalo lonke i-ultraviolet. Iibane ze-solarium azikhuselekanga, kuba ii-ray zazo ezinama-ultraviolet zinamaxesha angama-15 anamandla kunama-solar.
Abo ba tyelela i-solarium ngaphezu kweyodwa ngenyanga, bazibeka engozini yomdlavuza wegazi. Amantombazana amaninzi kunokuba athabathe ilanga kunye ne-beach to autosunburns, umgangatho wabo unyaka ngamnye uphucula. Abavelisi balo nyaka banikela i-gels ngosuku lwee-day.
Ukubunjwa kwawo kulula, okukuvumela ukuba uhlambe ngokukhawuleza emthunzini. Ayikho iphunga elithile, eliqhelekileyo kwi-autosunburns. Musa ukuya elunxwemeni kunye nokuzicoca okunjalo, kuba uya kuhlamba emanzini.
Iimveliso ezixubayo zinika i-skin tint kancane. Kwindlela yokwakhiwa kwe-autosunburns, izinto ezinomsoco zenziwa: umbala kunye nokunakekelwa kwibhotile enye. Oku kulungelekile, kodwa kufanelekile kuphela kubantu abanezondlo, kungekudala umthunzi ogcweleyo uza kuvela. Kuya kuba nomngcipheko wombala ongalinganiyo. Ekuqaleni kuyimfuneko yokwenza okanye ukwenza i-peeling.
I-Autosunbals kunye neengqungquthela eziqhaqhazelayo zinceda ubuncinci ukuba zifihla iziphene zesikhumba, njengamanqaku elula kunye ne-cellulite.
Uye waqhelana neemfihlelo zesikhumba esihle sempilweni ebusweni, kwaye uyazi indlela yokugcina ulutsha nobuhle besikhumba sakho.
IiSerum zokunyamekela kwesikhumba
Ngaba ukubonakala kwindoda ebalulekileyo kumfazi?
Buckwheat kunye namakhowe kwi-multivariate
UMargaret Mitchell. Yakha umxholo
Umaski wokuqhekeka uphela kunye nobusi ekhaya
Unyango kunye nokukhusela i-edema yesifo
Amabele amabisi kunye nesipinashi kunye nama-mushroom